ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > ကို MB ဇူလိုင်လ 2017
သမ္မာကျမ်းစာသည် စိတ်-ခန္ဓာပြဿနာကို တိုက်ရိုက်မဖြေရှင်းသော်လည်း၊ လူ့ဖြစ်တည်မှု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သော အခြမ်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကိုးကားပြီး ခန္ဓာကိုယ် (ခန္ဓာ၊ ဇာတိ) နှင့် ဝိညာဉ် (စိတ်၊ ဝိညာဉ်) အကြား (ဓမ္မသစ်ကျမ်းဝေါဟာရ) ခွဲခြားထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ်သည် မည်သို့ဆက်စပ်ပုံ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် မည်ကဲ့သို့ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို အတိအကျမရှင်းပြထားသော်လည်း ၎င်းတို့နှစ်ခုကို ခွဲခြား၍မရသကဲ့သို့ ၎င်းတို့အား လဲလှယ်နိုင်သောအဖြစ်နှင့် ဖော်ပြခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဝိညာဉ်အား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ် ဘယ်သောအခါမှ လျှော့ချမည်မဟုတ်ပေ။ ကျမ်းပိုဒ်များစွာသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ ထူးခြားသော “ဝိညာဉ်တော်” ကို ညွှန်ပြပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်သည်ဟု ညွှန်ပြသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ပြသသည် (ရောမ၊ 8,16 နှင့် ၁ ကော 2,11).
စိတ်-ခန္ဓာပြဿနာကို သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခြေခံကျသော သွန်သင်ချက်ဖြင့် စတင်ရန် အရေးကြီးသည်- လူသားများ မရှိနိုင်ဘဲ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့၊ သာလွန်သော ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်နှင့် သာလွန်သော သာလွန်သော ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်နှင့် တည်ရှိနေသည့် ဆက်ဆံရေးထက် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဖန်ဆင်းခံအရာအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏တည်ရှိမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းနှင့် လုံးဝကင်းကွာပါက ဖန်ဆင်းခြင်း (လူသားများအပါအဝင်) တည်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဖန်ဆင်းခြင်းသည် သူ့အလိုလို ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏တည်ရှိမှုကို သူ့အလိုလို မထိန်းသိမ်းထားဘဲ - ဘုရားသခင်သာလျှင် သူ့အလိုလိုတည်ရှိသည် (ဓမ္မဗေဒပညာရှင်များက ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ သက်သာရာရမှုကို ပြောဆိုကြသည်)။ ဖန်ဆင်းခံအရာအားလုံး၏တည်ရှိမှုသည် ကိုယ်တိုင်တည်ရှိနေသောဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာပါ သက်သေခံချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး အချို့က လူသားများသည် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများထက် သာလွန်သောအရာမဟုတ်ဟု အချို့က ဆိုကြသည်။ ဤပြောဆိုချက်သည် အောက်ပါမေးခွန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်- လူ့အသိစိတ်ကဲ့သို့ အချည်းနှီးသောအရာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ သတိလစ်သည့်အရာမှ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သနည်း။ ဆက်စပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ အာရုံခံအချက်အလက်ကို ဘာကြောင့် ခံယူချက်ရှိတာလဲ။ ဤမေးခွန်းများသည် အသိဉာဏ်သည် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းဟုတ်မဟုတ် သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးနှောက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သော) အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ရှိမရှိ၊ သို့သော် ခွဲခြားထားရန် လိုအပ်သည်။
လူတွေမှာ ဝိညာဏ် (ရုပ်ပုံ၊ သညာနဲ့ ခံစားချက်တွေပါတဲ့ အတွင်းကမ္ဘာ) ဆိုတာကို လူတိုင်းနီးပါး သဘောတူလက်ခံကြပြီး အစာနဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ စိတ်နဲ့ တကယ့်အစစ်အမှန်ပါပဲ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိစိတ်/စိတ်၏ သဘောသဘာဝနှင့် အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှု မရှိပါ။ ရုပ်ဝါဒီများက ၎င်းအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးနှောက်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုမှု ရလဒ်အဖြစ်သာ မှတ်ယူကြသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုဝါဒီများ (ခရစ်ယာန်များ အပါအဝင်) သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးနှောက်နှင့် ထပ်တူမကျသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုအဖြစ် မြင်သည်။
အသိစိတ်နှင့်ပတ်သက်သော ထင်မြင်ယူဆချက်များသည် အဓိက အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိသည်။ ပထမအမျိုးအစားမှာ ရုပ်ဝါဒ (ရုပ်ဝါဒ) ဖြစ်သည်။ ဤအရာက မမြင်နိုင်သော ဝိညာဉ်လောကတွင် မရှိဟု သွန်သင်သည်။ အခြားအမျိုးအစားကို Parallel dualism ဟုခေါ်ပြီး စိတ်သည် ရုပ်မဟုတ်သော ရုပ်လက္ခဏာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း သင်ပေးသောကြောင့် ၎င်းကို ရုပ်သက်သက်ဖြင့် ရှင်းပြ၍မရပေ။ Parallel dualism သည် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်အား ပြိုင်တူ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုသည့် အလုပ်အဖြစ် ရှုမြင်သည် - ဦးနှောက် ထိခိုက်သောအခါ၊ ဆင်ခြင်တုံတရား ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ချို့ယွင်းသွားနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ parallel interaction ကိုလည်း ထိခိုက်ပါတယ်။
Parallel dualism ၏ဖြစ်ရပ်တွင်၊ ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကြားတွင် မြင်နိုင်သော နှင့် မမြင်နိုင်သော အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကြားတွင် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေရန် လူသားများတွင် dualism ဟူသော ဝေါဟာရကို အသုံးပြုသည်။ လူတစ်ဦးစီတွင် တစ်ဦးချင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့် အသိစိတ် ဖြစ်စဉ်များသည် ပုဂ္ဂလိက သဘောသဘာဝ ရှိပြီး ပြင်ပလူများ လက်လှမ်းမမီနိုင်ပေ။ အခြားသူတစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကို မတွေ့နိုင် (အချိန်အများစုမှာ ဘုရားသခင်က ထိုကဲ့သို့ စီစဉ်ပေးသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။) ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသော လူ့အယူအဆအချို့ကို ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအဖြစ်သို့ လျှော့ချ၍မရပါ။ စံနှုန်းများတွင် မေတ္တာ၊ တရားမျှတမှု၊ ခွင့်လွှတ်မှု၊ ဝမ်းမြောက်မှု၊ ကရုဏာ၊ ကျေးဇူးတော်၊ မျှော်လင့်ချက်၊ အလှတရား၊ အမှန်တရား၊ ကောင်းမြတ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူသားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တာဝန်များ ပါဝင်သည် - ၎င်းတို့သည် ဘဝ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ကို ပေးသည်။ ကောင်းသောဆုကျေးဇူးအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်က ပြောပြသည် (ယာကုပ် 1,17) ဤစံနှုန်းများတည်ရှိမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့သဘောသဘာဝကို ဂရုစိုက်ခြင်း—ဘုရားသခင်မှ လူသားတို့အား လက်ဆောင်များအဖြစ် ဤအရာက ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်းပြနိုင်မလား။
ခရစ်ယာန်များအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်၏ စူးစမ်းမရနိုင်သော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ထောက်ပြသည်။ ၎င်းတွင် ဖန်ဆင်းခံအရာများ (သဘာဝအကျိုးသက်ရောက်မှု) သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မမြင်နိုင်သောကြောင့်၊ သူ၏အမှုတော်ကို တိုင်းတာ၍မရနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့အလုပ်က ရုပ်ဝတ္ထုလောကထဲမှာ ရှိတယ်။ သူ၏လက်ရာများသည် မှန်းဆ၍မရနိုင်ဘဲ လက်တွေ့ကျကျ နားလည်နိုင်သော အကြောင်းတရား-သက်ရောက်မှုကွင်းဆက်များအဖြစ်သို့ လျှော့ချ၍မရနိုင်ပါ။ ဤအမှုများတွင် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းသာမက လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ပြီးမြောက်ခြင်းအတွက် ယေရှုခရစ်၏မျှော်လင့်ထားသော ပြန်လာခြင်းအပြင် ကောင်းကင်သစ်တည်ထောင်ခြင်းနှင့် မြေကြီးသစ်။
စိတ်-ခန္ဓာပြဿနာသို့ ပြန်သွားရန်- ရုပ်ဝါဒီများက တွေးခေါ်မှုကို ရုပ်ပိုင်းအရ ရှင်းပြနိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤအမြင်သည် မလိုအပ်ဘဲ မလိုအပ်ဘဲ စိတ်ကို အတုယူ၍ မျိုးပွားခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပွင့်စေသည်။ “Artificial Intelligence” (AI) ဟူသော ဝေါဟာရကို စတင်အသုံးပြုကတည်းက၊ AI သည် ကွန်ပြူတာတီထွင်သူများနှင့် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်စာရေးဆရာများမှ အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် ရှုမြင်သည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက် AI သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာ၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အယ်လဂိုရီသမ်များကို ဆဲလ်ဖုန်းမှ မော်တော်ကားအထိ စက်ကိရိယာ အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဂိမ်းစမ်းသပ်မှုများတွင် စက်များသည် လူများကို အနိုင်ယူပြီး ထိုကဲ့သို့သော တိုးတက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။ 1997 ခုနှစ်တွင် IBM ကွန်ပျူတာ Deep Blue သည် အုပ်စိုးသူ ကမ္ဘာ့စစ်တုရင်ချန်ပီယံ Garry Kasparov ကို အနိုင်ယူခဲ့သည်။ Kasparov သည် IBM ကို လိမ်လည်မှုဟု စွပ်စွဲကာ လက်စားချေရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ IBM က အဲဒါကို မငြင်းချင်ပေမယ့် စက်က လုံလုံလောက်လောက် အလုပ်လုပ်ပြီး အနားယူဖို့ Deep Blue ကို လွှတ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ 2011 ခုနှစ်တွင် Jeopardyuiz Show သည် IBM ၏ Watson Computer နှင့် ထိပ်တန်း Jeopardy ကစားသမားနှစ်ဦးအကြား ဂိမ်းတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့သည်။ (မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုမည့်အစား ကစားသမားများသည် ပေးထားသောအဖြေများအတွက် လျှပ်တစ်ပြက်အမြန်နှုန်းဖြင့် မေးခွန်းများကို ပုံဖော်သင့်သည်။) ကစားသမားများသည် ကြီးမားသောအနားသတ်ဖြင့် ဆုံးရှုံးသွားကြသည်။ (အဲဒါက ရယ်စရာလို့ ပြောလို့ရတယ်) အဲဒါကို ဒီဇိုင်းထွင်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့ Watson က မပျော်ဘူးလို့ပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် AI ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာတွေက လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒါ ငါတို့ကို တစ်ခုခုပြောပြသင့်တယ်။
စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်သီးခြား၊ ကွဲပြားနေသည်ဟူသောလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားမရှိဟုပစ္စည်းဝါဒီများကဆိုကြသည်။ သူတို့က ဦး နှောက်နှင့်သိစိတ်သည်အတူတူဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ စိတ်သည် ဦး နှောက်၏ကွမ်တန်လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သည်သို့မဟုတ် ဦး နှောက်အတွင်းရှိဖြစ်စဉ်များ၏ရှုပ်ထွေးမှုမှပေါ်ပေါက်လာသည်။ “ ဒေါသထွက်နေသောဘုရားမဲ့ဝါဒီများ” ဟုခေါ်သည့်ဒန်နီယယ်ဒဲနက်ကနောက်ထပ် ပို၍ ပင်သွားသည်။ ခရစ်ယာန် Apologist Greg Koukl သည် Dennett ၏အငြင်းပွားမှု၏အခြေခံအားနည်းချက်ကိုထောက်ပြသည်။
အကယ်၍ စစ်မှန်သောသတိမရှိလျှင်၎င်းသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ရုံမျှသာဖြစ်ကြောင်းပင်ရိပ်မိရန်အတွက်လမ်းမရှိချေ။ အကယ်၍ ဝိညာဏ်သည်ထင်ယောင်ထင်မှားကိုရိပ်မိရန်လိုအပ်ပါက၎င်းသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုနည်းတူစွာပင်နှစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောကမ္ဘာကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုတကယ့်အဖြစ်မှန်နှင့်ထင်ယောင်ထင်မှားများကိုသိမြင်ရန်လိုအပ်သည်။ အမြင်တစ်ခုလုံးသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်မှတ်မိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကို ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း (empirical) နည်းလမ်းများဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ မြင်နိုင်သော၊ တိုင်းတာနိုင်သော၊ စိစစ်နိုင်သော နှင့် ထပ်တလဲလဲနိုင်သော အရာများကိုသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သက်သေပြနိုင်တဲ့ အရာတွေသာ ရှိခဲ့ရင် ထူးခြားတဲ့ အရာ (ထပ်ခါတလဲလဲ မရနိုင်ပါ) ဆိုတာ ရှိမနေနိုင်ပါဘူး။ ဤသို့ဆိုလျှင်၊ ထူးထူးခြားခြား၊ ထပ်တလဲလဲမဖြစ်နိုင်သော အဖြစ်အပျက်များ၏ နောက်ကြောင်းလိုက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော သမိုင်းသည် တည်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် အဆင်ပြေနိုင်သည်၊ အချို့အတွက်မူ ၎င်းသည် တိကျသောနှင့် နှစ်သက်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့် ထိုအရာများသာရှိကြောင်း ထင်သလိုထင်သလို ရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ သက်သေပြရန် နည်းလမ်းမရှိ၊ ဤနည်းလမ်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့် အဖြစ်မှန်တစ်ခုလုံးကို လျှော့ချခြင်းသည် ယုတ္တိမတန်ပါ။ ဤအမြင်ကို တစ်ခါတစ်ရံ သိပ္ပံပညာဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
Jesus erinnert uns daran, dass unser Denkvermögen ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachfolge als seine Jünger ist. Unser Bewusstsein verleiht uns die Fähigkeit des Glaubens an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es hilft uns, das Geschenk des Glaubens anzunehmen; dieser Glaube ist «eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht» (Hebräer 11,1). Unser Bewusstsein befähigt uns, Gott als Schöpfer zu kennen und ihm zu vertrauen, um zu «erkennen, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts (engl. Üs: aus nicht Sichtbarem) geworden ist» (Hebräer 11,3) ကျွန်ုပ်တို့၏အသိစိတ်သည် အကြောင်းပြချက်အားလုံးထက် မြင့်မားသောငြိမ်သက်မှုကို ခံစားနိုင်စေသည်၊ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုရန်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုကို ယုံကြည်ရန်၊ ထာဝရအသက်ကို ယုံကြည်ရန်၊ စစ်မှန်သောရွှင်လန်းမှုကို သိရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်တကယ်ဘုရားသခင်၏ချစ်လှစွာသောသားသမီးများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရန်၊ .